अलमलमा प्रदेश सभा : RajdhaniDaily.com
Homeबिचारअलमलमा प्रदेश सभा
आफ्नो जिम्मेवारी दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि पूरा नगर्ने र अर्काको विरोधमा मात्र समय फाल्दै जाने हो भने संघीयताको जग कसरी बलियो होला
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८३ अनुसार प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने अधिकार छ । हरेक अधिवेशनको आह्वान प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले गर्ने र पहिलो र दोस्रो अधिवेशनको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक प्रावधान छ ।
अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा पनि यदि प्रदेश सभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको २५ प्रतिशत सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने दिन, समय र स्थान तोकी बैठक वा अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था पनि संविधानद्वारा नै गरिएको छ यो व्यवस्थाले प्रदेशसभाको गरिमालाई अझ बढी उजिल्याएको छ । तर न्यूनतम् कामसमेत पार लगाउन नसक्ने प्रदेशसभाका लागि यसरी थप व्यवस्था आवश्यक देखिँदैन । जसले आधारभूत काम दुई वर्षका बीचमा पूरा गर्न सक्दैन, त्यो सभाबाट अन्य विषयको अपेक्षा बेकार ठहर्छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेमुताविक ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बाग्मतीमा ११० जना र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ४० जनासहित सातवटै प्रदेशमा कुल ५५० जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मन्त्रिमण्डल गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ र प्रदेशसभालाई बिजनेस दिने दायित्व प्रदेश सरकारको पनि हो । तर, यस मानेमा प्रदेश सरकार पनि चुकेको छ । आफ्नो उपस्थिति केका लागि भनी सिद्ध गर्न नसक्नेबाट दोस्रोको हकअधिकारका लागि काम गर्छन्् भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । हामी कहाँ प्रदेशसभा र सरकार दुवैको हालत यस्तै देखियो ।
संवैधानिक व्यवस्था ः नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ अनुुसार ‘प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाका तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुुईतिहाइ बहुुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुुनेछ’ भनी उल्लेख भएको छ । नामाकरणका हकमा संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ मा ‘प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धित प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुुईतिहाइ बहुमतबाट हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सात प्रदेशमध्ये दुईवटा प्रदेशले आजसम्म पनि नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । प्रदेशसभाका सदस्यले आफूले पहिलो बैठकमा नै गर्नुपर्ने काम नगरी नगर्नुपर्ने काममा हात हाल्न पुुगेका छन् । पहिलो बैठकमा नै गर्नुपर्ने काम यतिका अधिवेशन सकिँदा पनि नगर्नु भनेको उनीहरूको अक्षमता नै हो ।
संविधानले प्रदेशसभाको बहुमतबाट प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सक्ने अधिकार प्रदेशलाई नै दिएको छ । वर्तमान सरकारसँग दुुईतिहाइ बहुमत पनि छ ।
संविधानप्रदत्त अधिकार र दुईतिहाइको एकलौटी सरकार हुँदा आफ्नो प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन नसकेपछि प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको औचित्यतामाथि कसैले प्रश्न उठायो भने त्यसलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । प्रदेश सरकार आफ्नो न्वारानका लागि प्रदेशसभामा प्रस्ताव लान किन सक्दैन ? प्रदेशसभा यस विषयमा सरकारलाई रुलिङ् किन गर्दैन ? सधंै प्रदेशको नाम गणितीय संख्याबाट र प्रदेशको केन्द्र अस्थायी नामाकरणका आधारमा मात्र हुने हो त ? यसरी प्रदेश चल्न सक्छ ? चल्न मिल्छ ? आफूलाई संविधानले तोकिदिएको जिम्मेवारी पूरा नगरे पनि हुने हो ? अरूका लागि नीति, नियम बनाइदिने संस्थाले आफूलाई प्रदत्त संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नुपर्दैन ?
विद्यमान सात प्रदेशमध्ये अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी र बाग्मतीले मात्रै नाम र राजधानी टुंगो लगाएका
छन् । प्रदेश १ मा नाम विवाद छ । प्रदेश ५ मा नेकपाको दुईतिहाइ सरकार छ । यहाँ न नाम, न राजधानी दुवै टुुंगो लागेको छैन ।
प्रदेश १ को नाम तथा २ र ५ को नाम र राजधानी दुवै टुंगो लाग्न बाँकी छ । प्रदेश २ मा समाजवादी पार्टी र राजपाको गठबन्धन सरकार छ । नाम र राजधानीका लागि दुुईतिहाइ सरकारको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति यो प्रदेशलाई छैन ।
संयुक्त सरकारले प्रस्ताव लगी प्रदेशसभाबाट एकिन गराउन केले छेकेको छ ? आमजनतालाई अब प्रदेश सभाका सदस्यले जवाफ दिनैपर्ने हुन्छ ।
प्रदेशसभाले यस बीचमा विभिन्न बैठक बसी विभिन्न विधेयक पारित गरेर प्रदेश सरकारलाई सजिलो बनाइदिएको छ । संविधानको अनुुसूूची ६ अनुुसार २१ वटा एकल अधिकार क्षेत्र र अनुुसूूची ७ अनुुसार संघ र प्रदेशको २५ वटा साझा अधिकार क्षेत्रको उपभोग गर्न पाउने यो सभाले पहिलो अधिवेशनबाट आफ्ना लागि भने कार्य सञ्चालन नियमावली र सेवासुुविधा तोक्नेबाहेक अरू उल्लेख्य काम गर्न सकेन ।
यद्यपि, संसद्लाई विजनेस दिने सरकारले हो । विधेयकको उठान सरकारले गर्छ । बैठान मात्र सभाले गर्छ । यस मानेमा सरकारले नचाहँदा यो सभाले काम पाउन सक्दैन । सभाको सुुव्यवस्था गर्न, सभाका काम कार्बाहीलाई चुुस्त दुरुस्त र भरपर्र्दो बनाउन सभामुुखको महŒवपूर्ण भूमिका हुुन्छ ।
हाम्रा सन्दर्भमा प्रदेशसभा नवीन अनुुभव भएकाले सभामुुख यस मामलामा कम नै परिपक्व छन् । उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने, अतिरिक्त समयमा अभ्यास गराउने काम गर्न जरुरी थियो । यो काम भने हुन सकेन । नामाकरणमा नै सकस ः एक नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा राख्न सहमति जुटेको छ । तर, नामाकरणमा सकस देखिन्छ । नामाकरण भने अझै हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । लोकसेवा आयोग, प्रदेश लगानी बोर्ड, आर्थिक, जनसम्पर्क र सूचनाप्रविधि सल्लाहकार पनि नियुक्त गठरेका छन् । तर, प्रदेशको नामाकरणमा उनको पटक्कै ध्यान जान सकेको छैन ।
प्रदेश २ परपर हुँदै : संघीय सरकारले कर्मचारी भर्ना, प्रदेश प्रहरीलगायतका विषयमा ऐनकानुन नबनाइदिँदा रुष्ट
देखिन्छ । नाम र नामाकरणमा पनि यो प्रदेश पछि परेको छ । एक कार्यक्रमका बीच प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ‘हाम्रो पकडमा न शासन छ, न प्रशासन, कसरी चल्छ प्रदेश ?’ भन्ने प्रश्न उठाएका थिए ।
संघीय व्यवस्थामा मन्त्री पदको स्वाद चाखिसकेका मधेशका अर्का नेता उपेन्द्र यादव ‘सिंहदरबार निर्देशित यस्तो संघीयताको कुनै काम छैन’ भनी व्यंग्य गरेका थिए । काम नभएको संघीयतामा मन्त्री भएर स्वयं आफूले के कति काम गरे त्यो भने उनले भन्न छुटाए ।
आफ्नो पकडमा शासन व्यवस्था नभएको दाबी गर्ने मुख्यमन्त्री राउतलाई प्रदेशको न्वारान र राजधानी तोक्ने काम गर्न केले रोक्यो ? आमजनता प्रश्न गर्छन् । आफ्नो जिम्मेवारी दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि पूरा नगर्ने अर्काको विरोधमा मात्र समय फाल्दै जाने हो भने संघीयताको जग कसरी बलियो हुन्छ ?
जनकपुरधाम । धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिकामा साेमबार बिहान एक पोखरीमा आमाछोराको शव फेला परेकाे छ । धनुषाधाम नगरपालिका– २ धर्मपुर टोल बस्ने अशोक सिंहकी २८ वर्षीया...
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसकै कारण राजा महेन्द्रले निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लाद्न पाएको दाबी गरेका छन् । श्वेतशार्दूल (मदन भण्डारी) पुस्तक...
पौवादुङमा गाउँपालिकाले आफ्नै ब्रान्डको मह बजारमा पठाउने
भोजपुर । पौवादुङमा गाउँपालिकाले मौरीपालनमा प्रोत्साहन गर्ने उद्धेश्यले कृषकहरुलाई सात दिने व्यवसायीक तालिम दिएको छ । गाउँपालिकाले कृषकलाई मौरी सहितको ७७ घार वितरण गर्नु...
हिजो माधव नेपाललाई आज प्रचण्डलाई ओलीको फोन
हेलम्बुमा प्रधानमन्त्रीले भने : चन्द्र शम्सेरले बनाएको झोलुङगे पुल बगाएछ दुःख लाग्यो
घोषित पुरस्कार पाउन खेलाडीले अझै एक साता कुर्नुपर्ने
नेपाल पर्यटन बोर्डद्वारा उत्कृष्ट पाँच तस्बिर घोषित
अंकितले जिते इटालीमा आर्ट फिल्म अवार्ड
१५ वर्षीय किशोरीलाई सामुहिक बलात्कारपछि गाउँ निकाला
छिमेकीको सार्वभौम संवेदनशीलतालाई मनन गर